Iwe unoda yakanakisa Xbox Rimwe controller? Iyi ndiyo yakanakisa Xbox controller.
Kuti utambe mitambo paXbox One, iwe uchazoda controller, uye zvakakodzera kuve neiyo rudyi mutungamiriri. Microsoft's Xbox Elite Series 2 isina waya controller ndiyo yakanakisa mutambo wepadhi yekambani koni. Unogona kuzvijairira kune zvaunoda, kutsiva akasiyana zvikamu, uye kunyange remap mabhatani kuburikidza neapp yeconsole nePC.
Zvakanakisa kwazvo - Xbox Elite Wireless Controller Series 2
Iyo Xbox One controller inoshamisa kusununguka kushandisa kwenguva yakareba. Yakasimba, uye kazhinji inonzwa kunakidzwa kubata nekushandisa. Nekudaro, sezvinhu zvese, ine hupenyu, uye mamwe akakomba emitambo anogona kuapfeka nekukurumidza.
Ipapo kunouya iyo Elite Series 2, yazvino chimiro cheMicrosoft's nyanzvi-giredhi controller. Izvo chaizvo zvinochengeta zvakafanana zvakafanana dhizaini asi inovandudza chero zvese zvimwe zvinhu. Iwo matanda anobviswa uye anogara kwenguva refu, sezvakaita iyo D-pad. Kune mapaddle kumashure ayo anogona kuvezwa chero bhatani pane mutungamiriri uchishandisa anoshanda app yeXbox One uye Windows 10. Chinhu chose chakafukidzwa neinopfava-bata kupera. Kune akabata-ruoko, uye kune zvinomira zvekumisa.
Vamwe vanogona kutarisa mutengo wemutengo votaura kuti hapana mutungamiriri akakosha zvakadaro, uye zvakanaka. Kune vanhu vanoda kubhadhara pamusoro dhora, iyo Elite Controller ndiyo yakanyanya kunaka kutenderedza. Ichagara makore mazhinji kwenguva yakareba kupfuura wenguva dzose mutongi uye yakazara nezvinhu zvakakomba. Iyo Series 2 inowedzerawo Bluetooth mumusanganiswa weiri nyore waya pairing neako Windows 10 PC.
Hukuru kuvaka mhando
Tsika bhatani uye padhi padhiza mepu
Matanda anochinjika uye D-Pad
Inorema kupfuura yakajairwa controller
Xbox Elite Anodzora Series 2
$ 180 paMicrosoft
Sezvinei mutongi akanakisa ati ambogadzirwa.
Iyo Xbox Elite Mutongi 2 ndiyo yakanakisa Xbox controller yakamboitwa.
Yakanakisa Bluetooth - Nyowani Xbox Wireless Controller
Iwe nokutendeseka haugone kukanganisika neanodzora Microsoft yakazvigadzira pachayo. Kubva Xbox One S kutanga, Microsoft yaisanganisira kugona kweBluetooth pane zviri pamutemo controller, chinhu chisina kumbobvira chashandiswa nemazvo pakoni. Iyo inovhura kumusoro kushandisa iyo controller nePC uye Xbox console, zvakadaro. Inonyanya kubatsira kana iwe uri Mutambi wePass Ultimate anonyorera nekuwana kune ese akabatanidzwa PC mitambo.
Iyo nyowani Xbox Wireless Controller dhizaini dhizaini kuenderera kwekupokana zvakanakisa kwati kwambovepo pane chero chikuva, iine zvimiro zvaro zveanalogog uye saizi yakakwana inotungamira kune akawanda, maawa mazhinji ekutamba akasununguka. Iyo yazvino yekuvandudza inowedzera yakatsaurwa yekugovana bhatani, iyo iri nyore kwazvo kubvarura clip uye skrini kupfuura nzira yevakuru mutungamiriri uye inoshanda zvakangofanana neXbox One sekune iyo itsva Xbox Series X.
Inoshanda zvisina mushe nePC, futi, ingaita wired pamusoro peUSB-C kana pamusoro peBluetooth. Kana usiri fan of kurasa mabhatiri mukati mayo, zvakare kune yekutamba uye yekuchaja kit inowanikwa iyo inoishandura kuita rechargeable mutyairi.
Bhatani rekugovera rakatsaurwa
Bluetooth kuitira nyore PC kushandisa
Ergonomic uye yakasununguka kushandisa
Kwete rechargeable pasina kumwe kutenga
Haigare kwenguva yakareba seElite
Nyowani Xbox Wireless Controller
$ 60 paMicrosoft
Iyo Xbox One mutungamiriri inonatswa kuchizvarwa chitsva, ichichengetedza dhizaini yakanaka uye ichiwedzera zvimwe zvemabhonasi kunge bhatani rekugovera rakapihwa.
Zvakanakisa kune vateveri veRetro - Hyperkin duke
Hyperkin neXbox zvakabatana kumutsidzira zvekare Xbox mutongi, anozivikanwa nerudo saiye "Duke." Dai iwe usiri wekutamba pane yekutanga Xbox koni, iwe uri mune yekurapa chaiko, kunyangwe kana iri yakakura nemazuvano mazinga, saka iro zita.
Iyo ichiri yakanyatsogadzirwa zvakanaka uye mitambo akati wandei ekuvandudza kunatsiridza kubhodhi, kusanganisira 3.5mm odhiyo uye mabhatani epafudzi. Kune zvakare yakanaka OLED kuratidzwa pakati, iyo inoratidza iyo OG Xbox boot animation pane ese mapepanhau. Uyu mutungamiriri is stunner uye inokodzera nzvimbo mune chero Xbox fan imba. Inonzwa sekunge yakabuda yakananga kubva kumalabhu eMicrosoft.
Icho chidimbu chenhoroondo yekutamba yakadzoserwa kuhupenyu kumitambo yazvino, uye nepo ichinyatsoita semhuka, vateveri venguva refu veXbox vanozoinamata. Izvo hazvigoneke kwete! Uye ndeipi nzira iri nani yekutamba iyo yekutanga-gen Xbox mitambo pakushandira kumashure?
Dhizaini yakatendeka kune yekutanga
Kuratidzwa kweOLED kubata kwakanaka
Yakagadziridzwa ine headset jack
Inouya chete wired
Zvinogona kuve zvakaoma kubata dzimwe nguva
Zvakanakisa kune vateveri veRetro
$ 70 paMicrosoft
Icon inoberekwazve yenguva yemazuva ano
Iyo Duke yaive yakakwana chikamu panguva iyoyo, nanhasi nanhasi.
Yakanakisa wired - Razer Wolverine Pakupedzisira
Iyo Wolverine inogadzikana zvizere, ine wired (izvo zvakakosha kune vazhinji vevamhanyi vachiri kufarira izvi pamusoro peasina waya) mutungamiriri izvo mutsauko pane zvakajairika dhizaini. Iwe une yakavakirwa-mukati meodhiyo odhiraivhu pasi pasi, mapadduru kumashure, uye RGB kuvhenekesa kutenderedza iyo Xbox bhatani.
Iyo Wolverine, sekunge iine Xbox Elite, yakanangidzirwa panzvimbo yemakwikwi - avo vanoda mutungamiriri uyo kwete chete akawedzera kugadzikana asi zvimwe zvinowedzerwa senge iwo mapaduru, ayo anogona kuve ese akaiswa pamarongedzo ako ega marongero. Wired zvakare iri nani sarudzo yemakwikwi ekutamba nekuti kubatana kwacho kuchazonyanya kuvimbika.
Iyo inosanganisirwa tambo yakareba zvakakwana kuti ikubvumidze kuti ugare kure kure nechidzitiro kana uchida, uye zvakare zvinoreva kuti hausi kuzombopererwa nesimba kana kuenda kuchinge kwaoma. Iyo Wolverine zvakare yakafanana neyakagadzirwa neMicrosoft dhizaini, saka zviri nyore kushandisa kwenguva yakareba.
Zvakanakisa kune vanokwikwidza vatambi
Yakareba, tambo yakarukwa
Zvigadziriso zvigadziriso uye mabhatani
Yakabatanidzwa odhiyo odhiyo
Dhizaini dhizaini haina kujairika
Hapana sarudzo yekushandisa zvisina waya nePC
Razer Wolverine Pakupedzisira
Ivo vanozvidaidza ekupedzisira pasina
$ 140 ku Amazon
Razer inounza chroma, maficha, uye zvinokwenenzverwa zvikamu mune yayo inoshamisa controller.
Yakanakisa bhajeti - SimbaA Spectra
Kana iwe uchingoda yakasimba robust iyo inodhura zvishoma sezvinobvira, iwe haugone kuita zvirinani zvirinani kupfuura uyu nifty controller kubva kuPowerA. Iyo isingadhuri asi yakagadzirwa zvakanaka uye inonakidza kushandisa, uye sezvo Xbox Rimwe vatungamiriri vari kumberi kunoenderana, ndiyo yakanaka yechipiri controller yenguva dzaunoda vamwe vatambi vemuno.
Haisi iyo chaiyo saizi uye chimiro seyakajairwa Xbox controller, asi iri padyo padyo. Mabhatani ese ari munzvimbo chaipo, uye mahedhifoni jack ari pazasi. Iwe zvakare une hushoma mudiki muchimiro chemavhenekerwa akavhenekerwa akatenderedza mativi, mabhatani, uye matanda.
Iyo inongouya chete newaya, asi kune chimwe chinhu chisingadhuri, chinouraya ipashure yekumashure uye maviri-danho trigger inomira. Uyu mutungamiriri anopa zvimwe zvechiitiko iwe chaunowana kubva kuChinyorwa 2 Elite asi pamutengo wakanyanya, wakadzika kwazvo. Uye zvakaoma kupokana nazvo.
Dhizaini padhuze neyepamutemo controller
Trigger inomira uye kumashure mapaduru
Yakapfava-yekubata kupfeka inowana yakanyanya grubby
Hapana mafrills, asi zvakadaro mhando yakanaka
Yekutanga, inokwanisika, asi ichiri yakagadzirwa zvakanaka uye yakavimbika inoita mutungamiriri
Yakanakisa arcade tsvimbo - Hori Chaiyo Arcade Pro.V Kai Kurwisa Tsvimbo
Kana iwe uri mukurwira mitambo, iwe uchazoda arcade tsvimbo kuti utore yako kuita kune inotevera nhanho. Iko kusanganiswa kwemabhatani ekudzvanya uye enzira shanduko zvinonyanya kushandirwa nechimwe chinhu senge ino yakanaka tsvimbo kubva kuHori
Iri kurongedza yekutanga Hayabusa tsvimbo uye maKURO mabhatani asi zvakare inobvumidza kune kumwe modding. Zviri nyore kuita netsvimbo iyi. Pane yakakwana tambo yekuchengetedza, uye inotaridzika kuva yakapinza, futi.
Iko mutengo unodhura, asi kana iwe ukatamba toni yemitambo yekurwa, iwo mutengo unofanirwa kubhadhara kukwidza mutambo wako padanho rinotevera.
Yakakurumbira uye inoonekwa-zvakanaka tsvimbo yeHayabusa
Imwe yeakakura arcade matanda
Yakanakisa arcade tsvimbo
Hori Chaiyo Arcade Pro.V Kai Kurwisa Tsvimbo
Iyo tsvimbo kumusoro kwako Kurwisa mutambo kuita
$ 162 ku Amazon
Iyo yekupedzisira yekuisa yeXbox varwi vane mhando tsvimbo uye bhatani combo.
Yakanakisa kumhanya vhiri - Anosimudzira TS-XW
Kune akakomba chaiwo emhanyi paXbox One, haugone kuita zvirinani izvozvi pane vhiri iri. Kutenda kudyidzana kwaSparco, iyo TS-XW yakavakirwa pane chaiyo vhiri vhiri, rakatemwa muAlcantara, rakavakwa chose kubva pasimbi, uye iine maviri mahombe padhi ekuchinja.
Izvo hazvisi zvekufenda pamoyo, uye kutyaira neiri vhiri kunokupa iwe zvishoma yekurovedza muviri. Iwo mahedhi akafanana nehupenyu uye anokwanisa kuchinjika, uye nekutenda kuTrustmaster's system, unogona kunyange kuchinjanisa vhiri iro pacharo kuti riite dhizaini yekushandisa pane imwecheteyo base.
Iko kutenderera kunoenda kuburikidza yakazara 1,080 madhigirii, uye kana iwe ukaisungirira iyo kuPC yako, iyo Thrustmaster app ichakubvumidza iwe kuti uchinjise izvo kuve yetsika kukosha, saka zvinoshanda kune ako ese mitambo. Kana iwe uchida kwechokwadi, iwe uchaiwana iko pano.
Anoshamisa simba mhinduro
Yakanakisa kumhanya vhiri
$ 700 kuDell
Pedyo iwe zvaunogona kusvika kuchinhu chaicho usina ngowani
Kubva pane vhiri chairo, ichi ndicho chirevo cheiyo sim racing Hardware pane Xbox.
Kune akawanda akanakisa Xbox One vatongi kunze uko izvozvi, kusanganisira iyo iwe yaunowana mubhokisi ine koni. Kunyangwe zvirinani, pane sarudzo yakanaka kune chero chero mhando yemitambo.
The Xbox Elite Anodzora Series 2 ndiyo imbwa yepamusoro, zvakadaro, ichisanganisa dhizaini yakajeka yeyakajairika controller pamwe nekuwedzera maficha uye zvinokwanisika zvikamu, pamwe neyakareba, inogara-kwenguva refu kuvaka.
Asi kunyangwe iwe uri mumitambo yekumhanya, kurwa mitambo, kana kuda chimwe chinhu chakatarisika zvakanyanya, pane chimwe chinhu kunze kwako. Inguva huru yekuve Xbox Rimwe gamer.
Ingori iine Xbox One S kana Xbox One X? Hezvino izvo zvaunoda kuti uzive!